Somali News 3.21.22
Published March 22, 2022 at 9:49 AM CDT
Khatar iman karta ayaa ku qasabtay in laga raro dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Koonfurta Sioux City galabnimadii Isniinta. Farriin ka timid degmada dugsi ayaa sheegaysa in dhammaan ardayda iyo shaqaaluhuba ay badqabeen oo dhammaan wixii ka dambeeyay hawlaha dugsiga la joojiyay. Maamulka ayaa baaraya sax ahaanshaha khatarta.
Guddiga Garsoorka ee Senetka ayaa bilaabay dhageysiga xaqiijinta Maxkamadda Sare ee Garsoore Ketanji (keh-tawn-jee) Brown Jackson, haweeneydii ugu horreysay ee Madow ah oo loo magacaabo maxkamadda ugu sarreysa qaranka.
Dimuqraadiyiinta oo ku maamula golaha guurtida inta ugu yar ee margins waxay rabaan inay soo gabagabeeyaan xaqiijinteeda ka hor Easter. Jackson ayaa la filayaa inuu ka jawaabo su'aalaha guddiga 11 Dimuqraadiyiinta iyo 11 Jamhuuriga laga bilaabo Talaadada.
Chuck Grassley oo ka tirsan Iowa, oo ah xisbiga ugu sarreeya Jamhuuriga ee Guddiga Garsoorka, ayaa sheegay in maamulku uu ka xayiray diiwaannada waqtigii Jackson ee Guddiga Xukunka ee Mareykanka.
Jackson waxa uu taageero ka helay kooxo dhawr ah iyo dadka saamaynta ku leh bulshada sharciga ah, ee ku wajahan xidhiidhka siyaasadeed.
Aqalka Republicans-ka ayaa soo jeedinaya barnaamij cusub oo 12-milyan oo doollar ah oo deeq waxbarasho ah kaas oo loogu talagalay in lagu yareeyo yaraanta xoogga shaqada ee Iowa.
12-ka milyan ee doollar ayaa la siin doona ardayda wax ka barata maadooyinka shaqo ee baahida sare loo qabo ee dhammaan saddexda jaamacadood ee Iowa.
Lacagta kala badh ayaa loogu talagalay kuwa wax baranaya si ay macalimiin u noqdaan. Qaybta kale waxaa loogu talagalay ardayda ku jirta qaybaha kale ee shaqo ee loo baahan yahay sida ay go'aamisay Horumarinta Shaqaalaha Iowa.
Ardaydu waxay u qalmi doonaan labadii sano ee u dambeeyay ee kulliyadda. Kuwa jooga oo ka shaqeeya Iowa hal sano ka dib markay qalin jabiyeen waxay heli karaan wadar dhan 10-kun oo doolar.
Aqalka Jamhuuriga uma soo jeedinayaan kordhinta miisaaniyada guud ee jaamacadaha dadweynaha ee Iowa.